I-Google Webmaster Central ifumana uPhuculo oluKhulu | Martech Zone
NgoLwesithathu, Aprili 28, 2010 NgoLwesithathu, Novemba 5, 2014 Douglas Karr
Ngelixa ndisebenza nomthengi ngale ntsasa, ndingene Google Webmaster Central ukujonga imibuzo ephezulu yokukhangela ukuqhuba kwezithuthi. Into endiyifumeneyo yenye ye-heck yohlaziyo oluluncedo!
Endaweni yokubonelela ngamagama aphambili, izikhundla kunye nokucofa, uGoogle uphucule ujongano kwisimbo sendlela yoHlolo lukaGoogle. Ukusukela ngoku isikhundla ngoku siyahluka ngokusekwe kwiprofayile yokukhangela, uGoogle ngoku ukubonelela ngokoluhlu lwezikhundla i-URL yakho eyafunyanwa kuyo, kunye nenani elipheleleyo lokuvela kunye nenqanaba lokucofa.
Iinkampani ezininzi kakhulu ziyalutyeshela isikhundla sazo sokukhangela kunye nenqanaba lokucofa kwiphepha leziphumo zeinjini yokukhangela (SERP). Njengoko unokwandisa iphepha lakho ukonyusa uguquko, kuya kufuneka wenze isihloko sephepha lakho kunye nenkcazo yemeta ukonyusa uguquko. Ukuba udidi # 1 nge # 3 kwaye ungena ngaphantsi kwe-10% konqakrazo, unomsebenzi ekufuneka wenziwe. Kuya kufuneka ukuba ufumane ama-50% nangaphezulu!
Ujongano olutsha kukuboniswa okuhle kwedatha. Nje ukuba ndikwazi ukuphonononga iphepha kunye nomthengi wam ngale ntsasa, sinokubona ithuba elinqabileyo eliphambi kwethu lokuqhuba izixa ezikhulu zezithuthi kwindawo enokuphuculwa kokusebenza kunye nenqanaba.
Musa ukuhlala kubahlalutyi yokwandisa indawo yakho yotshintsho- yithathe inyathelo umva kwaye uqinisekise ukuba usebenzisa iinjinjini zokukhangela kuqala. Uhlalutyo lukubonelela kuphela ngeenkcukacha kubakhenkethi abacofe-ngaphakathi… hayi abo bashiyekileyo!
tags: ikhamera +itegi yexabisoamaxabiso esongezo-kwinqwelo-mafuthaUmvakalisiLulamarblesstream
Epreli 28, 2010 ngo-9: 01 AM
Ewe. Ndilubonile utshintsho kutshanje. Ndonwabileoooooooo. Emva koko ndayijonga ngakumbi. NDinqwenela inokwenza ezinye izinto ezimbalwa ngedatha enjengokundixelela ukuba loluphi usetyenziso lukaGoogle oluvela kwinqanaba.
Ngaphandle kokuba indawo yam ikwindawo yokuqala kwiphepha 1 legama elithi “zombies,” “Hookah Lounge,” “Wrigley Field,” kunye no “Karen Gillan.”
Ndabhala iposti ngaphezulu nge-SEOBoy ukuba ufuna ukujonga (hayi ayisiyonto yamaqhinga yokufumana ukugcwala. http://bit.ly/de6Ot9).
Ndidinga ukwehla ndiye eIndy kwaye ndibone yonke.